Shina Aspiration sy pneumatika fampitaovana fitaovana, mpamatsy vola sy mpamatsy pneumatika mpamatsy fitaovana
Milina fametahana milina fametahana masinina
Sivan-tsivily fitotoam-bary vita amin'ny lafarinina ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny Sakafo, Grain ary Fahanana. Ampiasaina ihany koa amin'ny indostria simika, fitsaboana ary indostria hafa.
Ny masinina hanovana ny fitaovana fampitana torolàlana amin'ny rafitra fampitana pneumatika. Ampiasaina be amin'ny tsipika famonoana pneumatika, fikosoham-bary, fikosoham-bary sns.
Ny vanes sy ny spindle dia amboarina ho toy ny sombin-javatra. Ny root blower dia manana fiainana maharitra ary afaka mandeha tsy tapaka.
Amin'ny maha-mpitsoka PD (famindran-toerana miabo) dia tonga miaraka amin'ny tahan'ny fampiasana avo lenta sy ny fahombiazan'ny habetsahan'ny avo.
Amin'ny maha ventilator elektrika mahomby azy, ny mpankafy centrifugal antsika dia nosedraina fitsapana fifandanjana mavitrika tokoa. Izy io dia misy fihenam-bidy ambany sy fikojakojana mora foana. Ny fahombiazana sy ny haavon'ny feo voafaritra A dia milanja hatramin'ny fenitra grady A fehezin'ny fenitra nasionaly sinoa mifandraika.
Airlock Pressure Pressure
Ny famolavolana mandroso sy ny famolavolana tsara ity hidin-drivotra ity dia niantoka ny fihenan'ny rivotra ampy raha mihodina tsara ny kodiarana mihodina.
Misy vera fahitana eo amin'ny fidiran'ny vavahadin-tseron'ny tsindry ratsy hijerena mivantana.
Ny fitaovana dia miditra amin'ny fidirana ambony, ary mamakivaky ny impeller, ary avy eo dia mivoaka avy amin'ny outlet amin'ny farany ambany. Matetika izy io dia mety amin'ny famahanana fitaovana ao anaty fantsom-pamokarana tsindry tsara, ny fantsona faneriterena tsara dia hita ao amin'ny ozinina lafarina.
Sodina Pneumatika ho an'ny foto-pisaka vita amin'ny lafarinina: - Ny mpankafy be fantsona dia manome hery hampiakatra ny karazan-fitaovana afovoany rehetra avy amin'ny milina fitotoam-bary, mpanadio na famaranana amin'ny bran ho an'ny mpanamboatra planeta mba hanasiana sy hanasokajiana bebe kokoa. Ny fitaovana dia ampitaina amin'ny fantsom-pneumatika. Endri-javatra: - Namboarina mifanaraka amin'ny kajy marina; mamoron-karena tsara. - Vita amin'ny vy mahery mihodina izay ny hateviny dia 1,5mm ka hatramin'ny 2.5mm. - Mifono hery, ao anaty pirinty avy amin'ny vernis kilasy sakafo. - Miaraka amin'ny ...